Economist Prosper Chitambara of the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Sangano ravana chipangamazano munyaya dzehupfumi nebudiriro, re Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, (LEDRIZ), rinoti hurumende gore rino yakaisa mubhajeti rehutano mari shoma inofanirwa kushandiswa pagore nemunhu mumwe chete munyaya dzehutano izvo zviri kuita kuti zvipatara zvemunyika zvisangane nematambudziko asingaperi.
VaChitambara vakati munhu mumwe chete ari munyika akaisirwa parutivi mari inosvika maRTGS makumi mana nerimwe semari yekushandisa muhutano hwake kwegore rose.
VaChitambara vakati dzihurumende pasi rose dzinotara mari inofanira kushandiswa nemunhu mumwe chete munyaya dzehutano gore rose, yoiswa mubazi rezveutano.
VaChitambara vakati dzimwe nyika dzinnoisa parutivi mari inosvika zviuru zvitanhatu zvemadhora ekuAmereka pamunhu wega wega mubazi rezveutano semari yarinopihwa mubhajeti repagore.
VaChitambara vakati hurumende yakapa bazi rehutano mari inosvika mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora emaRTGS.
Studio7 yatadza kubata gurukota rezvehutano, Dr Obadiah Moyo, kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko munyika, VaNick Mangwana, varamba mashoko aya vachiti hurumende iri kuisa mari yakawanda kubazi rezveutano.
Mashoko aVaChitambara anobuda panguva iyo zvipatara zvizhinji munyika zviri kushaiwa mishonga, zvikwanisiro nezvimwe, izvo zviri kuita kuti varwere vazhinji varasikirwe nehupenyu nguva yavo isati yanyatsosvika.
Madhokotera anotiwo haakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haisi kuvakwanira.
Mune imwewo nyaya, varimi vemumaruwa eMasvingo vari kuchema chema nekudhura kuri kuita mbewu kunyanya yechibage vachiti nekushaikwa kwemari munyika, gore rino vachatadza kurima.
Va IShmael Chitukutu vanobva kwaChimombe kwaGutu, vanoti nekukwira kwakaita mitengo yembeu, gore rinouya vanogona kufa nenzara vasina kurima.
Kunyange mvura isati yanaya, varimi vazhinji kumaruwa vanoti ivo havasati vatanga kugadzirira kurima nekuti havana mari yembeu pamwe neyefetiraiza.
Dambudziko revarimi riri kuitika panguva iyo sangano reWorld Food Program riri kupemha mari yekutengera vanhu chikafu vanopfuura mamiriyoni masere munyika yose.